Wonke umuntu uyazi imifino indlela ewusizo futhi izithelo. Manje ethandwa kakhulu Smoothies isisindo ukulahleka. Indlela lokhu isiphuzo kungafaka ezihlukahlukene izingxenye. Inani elandayo ochwepheshe bathi le Smoothies ayisizi kuphela ulahlekelwe isisindo, kodwa futhi bangaba umkhiqizo esisemqoka ekudleni yokudla ukudla okunempilo.
Isimiso esiyisisekelo of kwesisindo ku Smoothies
Okokuqala kubalulekile siqonde ukuthi ziyini Ukudla smoothie zokupheka ezitholakala namuhla abayenzayo. It is kuphekelwa ekhethekile ngendlela cocktail ngesisekelo izithelo nemifino. Ngaphezu kwalokho, ukubunjwa yabo ingase ihlanganise ubisi soy noma imikhiqizo yobisi fat-free. Ukusetshenziswa kwalezi cocktail kungenxa okuqukethwe inqwaba amavithamini kanye fibre okukhuthaza ukuhlanzwa emathunjini. Ngu zokuhlanganisa lesi siphuzo ku ekudleni kwakho, ungalahlekelwa kuze 5 ngamakhilogremu in izinsuku 4 nje. Ngaphezu kwalokho, lezi cocktail bayakwazi ukukusindisa ezihlukahlukene nezinkinga isikhumba, izinzipho kanye izinwele. Uma unquma ukuzama izindlela smoothie isisindo ukulahleka ozokwethulwa ngezansi, uzodinga ukuqeda inyama kanye nenhlanzi, ukuba abe imifino isikhashana.
Uma ufuna ukulungisa kahle lesi siphuzo Ukudla, kudingeka afunde izimiso ezimbalwa ezisemqoka. Okokuqala, abakwazi wengeze ubhanana, ngoba iwumkhiqizo okunama-kilojoule amaningi. Ilungiselela isiphuzo esekelwe juice, kungcono ukukhetha apula, orange noma emhlophe. Cishe yonke inhlobo ungakwazi ukwengeza imbewu yefilakisi nedlanzana elincane walnuts noma alimondi. Okuqinile ayikho imikhawulo, ungakwazi ukupheka cishe kunoma iyiphi smoothie elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, imithi ayibona ifanele bona. Ngezansi kuphela lezo zingafundwa njengoba isisekelo cocktail ngoba nsuku zonke.
1. Smoothies isisindo ukulahleka. Recipe ngomcako kanye izaqathe
Thatha isigamu lime nokukodwa isanqante. imikhiqizo Hlanza futhi usike kubo tincetu. Indawo in a blender futhi ixubene 250 ml isanqante juice. Ngemva lanezela 250 ml ephansi fat ukhilimu omuncu, spice ukunambitheka. Manje ingxube okuholela kungenziwa ngesiswebhu.
2. Smoothies isisindo ukulahleka. Indlela Yokuthola yemifino ukuxubana
Ukuze wenze lokhu, kudingeka aphuze utamatisi, ikhukhamba kanye isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi. Chop yonke imikhiqizo, nigcwalise yogurt zemvelo. Hlanganisa lokhu isisindo bese wengeza nedlanzana anyanisi oluhlaza, Tabasco sauce, usawoti kanye pepper ukunambitha.
3. Smoothies isisindo ukulahleka. Indlela Yokuthola izithelo nemifino
Qoba apula, izaqathe, amawolintshi 2, 4-broccoli kanye isipinashi. Engeza 240 ml orange juice futhi zonke phehla.
Ukuze umphumela smoothie kwakusobala, kubalulekile ukuba usebenzise lezi iziphuzo kahle. Badinga ukudla isipuni, ngokucophelela futhi kancane. Uma ufuna ukufeza imiphumela ngokushesha ngangokunokwenzeka, udinga ukudla kuphela smoothie ngeviki noma ezimbili. Ngamanye amazwi, lo ukudla main udinga ukudla lesi siphuzo, futhi phakathi snacking on imifino noma izithelo. Ungakhohlwa ukuba baphuze amanzi. Uma ngokuphelele akudle akusebenzi ke lwanele abuyisele esisodwa noma ezimbili ukudla ngesikhathi main reception smoothie Ukudla kanye nokugcina ukudla okunempilo.
Amaprotheni Ukupheka unikina isisindo ukulahleka ekhaya
"Planet amagugu" (269 ezingeni) nezici ndima